သင့်ကို ဝစေတဲ့ အမှား ၆ မျိုး – Gentleman Magazine
သင့်ကို ဝစေတဲ့ အမှား ၆ မျိုး
သငျ့ကို ဝစတေဲ့ အမှား ၆ မြိုး
ဒီအမှားတွေကို မလုပ်မိရင် သင့်ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ အဆီတွေ ကျသွားမှာပါ။ သင့်ရဲ့ အဆီတွေ များများလျော့နိုင်လေ၊ သင့်ကြွက်သားတွေ ပေါ်လွင်လေပါ။ အောက်ပါ အစားအသောက် အကျင့်တွေထဲက သင်နဲ့ အကိုက်ညီဆုံး အကျင့် နှစ်ခုလောက်ကို ရွေးပြီး စကျင့်ကြည့်ပါ။ ပြောင်းလဲလိုက်ရင် အသိသာဆုံး ဖြစ်မယ့် တစ်ခုနှစ်ခုကို ရွေးပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မကောင်းတဲ့ အကျင့် အများအပြားကို တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ချိုးဖျက်ဖို့ဆိုတာ စိတ်အင်အား ကြီးကြီးမားမား လိုပါတယ်။ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် လုပ်ရင်တော့ သင် တစထက်တစ ပိုအချိုးကျလာပြီး တစ်ဘဝလုံး လှပတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။
၁. အစာစားချိန် ကျော်ခြင်း
အစာမစားခြင်းဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစာစားချင်စိတ်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ သင့်ရဲ့ မနက်စာဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေးညီညွတ်တာ တစ်ခုခုကို မစားပဲ နေလိုက်ရင် နောက် လာမယ့် အဆီများစာတွေ၊ အာလူးကြော်တွေကို သင့်ဦးနှောက်က ငြင်းဆန်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ပါဘူး။ တစ်နေ့လုံး အစာမစားတာကလဲ ညဘက်မှာ သင့်ကို အစားသရဲတစ်ယောက် ဖြစ်သွားစေပါတယ်။
သင့်ရဲ့ အစားအစာတွေကို တစ်ကြိမ်မှာ ကယ်လိုရီငါးရာနဲ့ အစာကြီး သုံးကြိမ်၊ ၁၀၀ ကနေ ၂၀၀ ကယ်လိုရီပါတဲ့ အပျင်းပြေစားစရာ ၂ ကြိမ်အဖြစ် ခွဲဝေလိုက်ပြီး အချိန်မှန်မှန်စားပါ။ သင့်စိတ်ကို ကြားထဲမှာ မစားမိအောင် စည်းကမ်းကပ်ထားပါ။
အစားအသောက် စားလို့ ဗိုက်ဝသွားရင် ဗိုက်ဝကြောင်းပြတဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ဖြည်းဖြည်းမစားရင် အဲဒီ ဟော်မုန်းထွက်ဖို့ အချိန် မပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ဝလို့ဝမှန်း မသိပဲ ထပ်စားတော့တာပါပဲ။
ဖြည်းဖြည်းစားပါ။ အရသာခံစားပါ။ TV ကြည့်ရင်း၊ သတင်းစာဖတ်ရင်း အမြန် မစားမိပါနဲ့။ ယောဂ နည်းလမ်းလေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ တစ် ကနေ ငါးအထိ ရေရင်း ရှုသွင်းပါ။ တစ်ကနေ ငါးအထိရေရင်း ရှုထုတ်ပါ။ အဲဒါကို အစားမစားခင် သုံးကြိမ်က ငါးကြိမ်အထိ လုပ်ပေးပါ။
၃. ပိတ်ရက်တွေမှာ အသားကုန်စားခြင်း
Leptin ဟော်မုန်းဟာ အစားစားချင်စိတ်ကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ Palmitic အက်ဆစ်ဟာ Leptin ဟော်မုန်းကို ယိုယွင်းစေပါတယ်။ အဲဒီ Palmitic အက်ဆစ်ဟာ ပြည့်ဝဆီတွေမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ပြည့်ဝဆီဆိုတာ သင့်ရဲ့ ပိတ်ရက်အစားအသောက်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဘာဂါတွေ၊ အာလူးကြော်တွေ၊ ကြက်ကြော်တွေမှာ ပါဝင်တာပါ။ ပိတ်ရက်မှာ အဲဒါတွေ စားလိုက်ရင် တင်္နလာနေ့မှာ သင် အစားစားလိုစိတ် အရမ်းများလာမှာပါ။ အဲဒီောတ့ ပိတ်ရက်တွေမှာ အရမ်းမစားပါနဲ့။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟင်းသီးဟင်းရွက်လောက်ပဲ စားပါ။
၄. ဆားများတဲ့ မုန့်တွေ စွဲနေခြင်း
ဆိုဒီယမ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို စားလို့စားမှန်း မသိပဲ စားမိအောင် ပြုစားနိုင်ပါတယ်။ ပေါက်ပေါက်၊ အာလူးကြော်၊ မြေပဲဆားလှော်တွေပါ။
တစ်ပါတ်နှစ်ပါတ်လောက် ဆားလျှော့စားလိုက်ရင် ဆားကို တောင့်တစိတ် ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ လူတော်တော်များများက အာလူးကြော်တွေကို မုန်လာဥနီတွေနဲ့ မလဲနိုင်ကြပေမယ့် စမ်းသပ်စားကြည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ဆားမပါတဲ့ အာလူးကြော်တွေစားကြည့်ပါ။ ဟင်းချက်ရင် ဆားထည့်မချက်ပဲ စားပွဲပေါ်မှာပဲ ဆားပုလင်းတင်ထပေးပါ။
တစ်နေ့ကို ဘီယာနှစ်လုံးသောက်ရင် တစ်ပါတ်ဆိုရင် ကယ်လိုရီ ၂၀၀၀ ရှိပါတယ်။ တစ်ပါတ်ကို တစ်ရက်စာ အဆီပိုတက်နေမယ့် သဘောပါ။ အရက်ဟာလဲ အစားလျော့စားချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ပျက်ပြားစေပါတယ်။ တစ်ပါတ်လောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖြတ်ကြည့်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန် လျော့သွားတာကို လက်တွေ့ ခံစားကြည့်ပါ။ တကယ် သောက်ချင်နေရင်လဲ ကယ်လိုရီနည်းတဲ့ Dry Red Wine သောက်ပါ။
၆. TV ရှေ့မှာ အစားစားခြင်း၊ ပြီးတော့ အိပ်ပျော်သွားခြင်း
သင် ကယ်လိုရီတွေ အသွင်းပဲရှိပြီး ဘာမှ ပြန်မသုံးပါဘူး။ ပြီးတော့ သင့်ရဲ့ အိပ်ချိန်ကိုလဲ လျော့နည်းစေပါတယ်။ TV ရှေ့မှာ စားသူတွေဟာ ပုံမှန်လူတွေထက် ကယ်လိုရီ ၃၀၀ နီးပါး ပိုစားလေ့ ရှိပါတယ်။ အိပ်ချိန်နည်းတဲ့သူတွေကလဲ မုန့်တွေ ၂၀၀ ကယ်လိုရီဖိုးလောက် ပိုစားတတ်ပါတယ်။
သင် TV ကြည့်ချင်ရင် သွက်သွက်လက်လက်နေပါ။ ဒါမှမဟုတ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးမှ TV ကြည့်ပါ။ အိပ်ချိန်မှန်မှန် အိပ်ရာထဲသွားပါ။
ဒီအမှားတှကေို မလုပျမိရငျ သငျ့ရဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျနဲ့ အဆီတှေ ကသြှားမှာပါ။ သငျ့ရဲ့ အဆီတှေ မြားမြားလြော့နိုငျလေ၊ သငျ့ကွှကျသားတှေ ပျေါလှငျလပေါ။ အောကျပါ အစားအသောကျ အကငျြ့တှထေဲက သငျနဲ့ အကိုကျညီဆုံး အကငျြ့ နှဈခုလောကျကို ရှေးပွီး စကငျြ့ကွညျ့ပါ။ ပွောငျးလဲလိုကျရငျ အသိသာဆုံး ဖွဈမယျ့ တဈခုနှဈခုကို ရှေးပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မကောငျးတဲ့ အကငျြ့ အမြားအပွားကို တဈပွိုငျနကျထဲ ခြိုးဖကျြဖို့ဆိုတာ စိတျအငျအား ကွီးကွီးမားမား လိုပါတယျ။ ဖွညျးဖွညျးမှနျမှနျ လုပျရငျတော့ သငျ တစထကျတစ ပိုအခြိုးကလြာပွီး တဈဘဝလုံး လှပတဲ့ကိုယျခန်ဓာကို ထိနျးသိမျးနိုငျသှားပါလိမျ့မယျ။
၁. အစာစားခြိနျ ကြျောခွငျး
အစာမစားခွငျးဟာ သငျ့ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အစာစားခငျြစိတျအပျေါ အကြိုးသကျရောကျစနေိုငျပါတယျ။ ဥပမာ သငျ့ရဲ့ မနကျစာဖွဈတဲ့ ကနျြးမာရေးညီညှတျတာ တဈခုခုကို မစားပဲ နလေိုကျရငျ နောကျ လာမယျ့ အဆီမြားစာတှေ၊ အာလူးကွျောတှကေို သငျ့ဦးနှောကျက ငွငျးဆနျနိုငျစှမျး မရှိတော့ပါဘူး။ တဈနလေုံ့း အစာမစားတာကလဲ ညဘကျမှာ သငျ့ကို အစားသရဲတဈယောကျ ဖွဈသှားစပေါတယျ။
သငျ့ရဲ့ အစားအစာတှကေို တဈကွိမျမှာ ကယျလိုရီငါးရာနဲ့ အစာကွီး သုံးကွိမျ၊ ၁၀၀ ကနေ ၂၀၀ ကယျလိုရီပါတဲ့ အပငျြးပွစေားစရာ ၂ ကွိမျအဖွဈ ခှဲဝလေိုကျပွီး အခြိနျမှနျမှနျစားပါ။ သငျ့စိတျကို ကွားထဲမှာ မစားမိအောငျ စညျးကမျးကပျထားပါ။
အစားအသောကျ စားလို့ ဗိုကျဝသှားရငျ ဗိုကျဝကွောငျးပွတဲ့ ဟျောမုနျးတှေ ထှကျလာပါတယျ။ ဖွညျးဖွညျးမစားရငျ အဲဒီ ဟျောမုနျးထှကျဖို့ အခြိနျ မပေးနိုငျတော့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယျ့ဘာသာ ဝလို့ဝမှနျး မသိပဲ ထပျစားတော့တာပါပဲ။
ဖွညျးဖွညျးစားပါ။ အရသာခံစားပါ။ TV ကွညျ့ရငျး၊ သတငျးစာဖတျရငျး အမွနျ မစားမိပါနဲ့။ ယောဂ နညျးလမျးလေးတဈခု ရှိပါတယျ။ တဈ ကနေ ငါးအထိ ရရေငျး ရှုသှငျးပါ။ တဈကနေ ငါးအထိရရေငျး ရှုထုတျပါ။ အဲဒါကို အစားမစားခငျ သုံးကွိမျက ငါးကွိမျအထိ လုပျပေးပါ။
၃. ပိတျရကျတှမှော အသားကုနျစားခွငျး
Leptin ဟျောမုနျးဟာ အစားစားခငျြစိတျကို ထိနျးညှိပေးပါတယျ။ Palmitic အကျဆဈဟာ Leptin ဟျောမုနျးကို ယိုယှငျးစပေါတယျ။ အဲဒီ Palmitic အကျဆဈဟာ ပွညျ့ဝဆီတှမှော ပါဝငျပါတယျ။ ပွညျ့ဝဆီဆိုတာ သငျ့ရဲ့ ပိတျရကျအစားအသောကျတှေ ဖွဈတဲ့ ဘာဂါတှေ၊ အာလူးကွျောတှေ၊ ကွကျကွျောတှမှော ပါဝငျတာပါ။ ပိတျရကျမှာ အဲဒါတှေ စားလိုကျရငျ တင်ျနလာနမှေ့ာ သငျ အစားစားလိုစိတျ အရမျးမြားလာမှာပါ။ အဲဒီောတ့ ပိတျရကျတှမှော အရမျးမစားပါနဲ့။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟငျးသီးဟငျးရှကျလောကျပဲ စားပါ။
၄. ဆားမြားတဲ့ မုနျ့တှေ စှဲနခွေငျး
ဆိုဒီယမျဟာ ကြှနျတျောတို့ကို စားလို့စားမှနျး မသိပဲ စားမိအောငျ ပွုစားနိုငျပါတယျ။ ပေါကျပေါကျ၊ အာလူးကွျော၊ မွပေဲဆားလှျောတှပေါ။
တဈပါတျနှဈပါတျလောကျ ဆားလြှော့စားလိုကျရငျ ဆားကို တောငျ့တစိတျ ပြောကျသှားပါလိမျ့မယျ။ လူတျောတျောမြားမြားက အာလူးကွျောတှကေို မုနျလာဥနီတှနေဲ့ မလဲနိုငျကွပမေယျ့ စမျးသပျစားကွညျ့ပါ။ ဒါမှမဟုတျ ဆားမပါတဲ့ အာလူးကွျောတှစေားကွညျ့ပါ။ ဟငျးခကျြရငျ ဆားထညျ့မခကျြပဲ စားပှဲပျေါမှာပဲ ဆားပုလငျးတငျထပေးပါ။
တဈနကေို့ ဘီယာနှဈလုံးသောကျရငျ တဈပါတျဆိုရငျ ကယျလိုရီ ၂၀၀၀ ရှိပါတယျ။ တဈပါတျကို တဈရကျစာ အဆီပိုတကျနမေယျ့ သဘောပါ။ အရကျဟာလဲ အစားလြော့စားခငျြတဲ့ စိတျဓာတျကို ပကျြပွားစပေါတယျ။ တဈပါတျလောကျပဲ ဖွဈဖွဈ ဖွတျကွညျ့ပွီး ကိုယျအလေးခြိနျ လြော့သှားတာကို လကျတှေ့ ခံစားကွညျ့ပါ။ တကယျ သောကျခငျြနရေငျလဲ ကယျလိုရီနညျးတဲ့ Dry Red Wine သောကျပါ။
၆. TV ရှမှေ့ာ အစားစားခွငျး၊ ပွီးတော့ အိပျပြျောသှားခွငျး
သငျ ကယျလိုရီတှေ အသှငျးပဲရှိပွီး ဘာမှ ပွနျမသုံးပါဘူး။ ပွီးတော့ သငျ့ရဲ့ အိပျခြိနျကိုလဲ လြော့နညျးစပေါတယျ။ TV ရှမှေ့ာ စားသူတှဟော ပုံမှနျလူတှထေကျ ကယျလိုရီ ၃၀၀ နီးပါး ပိုစားလေ့ ရှိပါတယျ။ အိပျခြိနျနညျးတဲ့သူတှကေလဲ မုနျ့တှေ ၂၀၀ ကယျလိုရီဖိုးလောကျ ပိုစားတတျပါတယျ။
သငျ TV ကွညျ့ခငျြရငျ သှကျသှကျလကျလကျနပေါ။ ဒါမှမဟုတျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပွီးမှ TV ကွညျ့ပါ။ အိပျခြိနျမှနျမှနျ အိပျရာထဲသှားပါ။
Previous: အဆက်ဟောင်းကို မေ့ပစ်လိုက်ဖို့ နည်းလမ်း(၉)ခု
Next: မလုပ်မဖြစ် လုပ်ရတာနဲ့ စိတ်ပါဝင်စားလို့ လုပ်တာ